♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: ****ဖတ်ပြီး....နည်းနည်းလေး.ပြုံးပါ**
(1) ***တစ်မူးသာတဲ့ အရူး***
စိတ်ကျန်းမာေ၇းဆေးရုံတစ်ရုံမှာ အရူးသူငယ်ချင်းသုံးယောက် ၇ှိပါတယ်...သူတို့ ဟာ ဆေးရုံထဲမှာ နေလာတဲ့ နှစ်တွေလဲ ကြာလာလို့အခြေအနေတွေ အတော်အသင့် ကောင်းလာတော့ ဆရာဝန်က သူတို့ သုံးယောက်ကို ခေါ်ပြီးတော့ ပြောပါတယ်..
ဆရာဝန်...မင်းတို့ သုံးယောက်ကိုအခုငါတစ်ယောက်ကို မေးခွန်းတစ်ခုစီမေးမယ်...တစ်ကယ်လို့ မှန်အောင်ဖြေနိုင်ရင် မင်းတို့ ကို ဒီဆေးရုံကနေ ဆင်းခွင့်ပေးမယ်..ကဲ အခုငါနဲ့ အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့ဆိုတော့...
ဆရာဝန်......***၁ နဲ့ ၂ ပေါင်းရင်..ဘယ်လောက်ရလဲ..***
ဆရာဝန် ခေါင်းခါပြီး မင်းဖြေတာ မှားနေတယ်..ကဲ မင်းဒီဆေးရုံမှာဆေးဆက်ကုရဦးမယ်...
ဆရာဝန်.........***၁ နဲ့ ၂ ပေါင်းဘယ်လောက်၇လဲ..***
ဒုတိယလူနာ...... ***၅ ပါဆရာ....***
ဆရာဝန်ခေါင်းခါပြီး မင်းဖြေတာ မှားနေတယ် ကဲမင်းလည်းဒီဆေးရုံမှာ ဆက်နေရဦးမယ်..
ဆရာဝန်...***၁ နဲ့၂ ပေါင်း ဘယ်လောက်ရလဲ..***
***ဟာ..မင်းတယ်တော်ပါလား ကဲမင်းဆေးရုံကနေဆင်းဖို့ ငါလက်မှတ်ထိုးပေးမယ်***....ဆိုပြီး ဆေးရုံကဆင်းခွင့်လက်မှတ်ကိုပေးလိုက်
ပါတယ် တတိယလူနာ အခန်းပြင်ရောက်တော့ ကျန်တဲ့လူနာရူးနှစ်ယောက်က မေးတာပေါ့..
တတိယလူနာကက ***မင်းတို့ နှစ်ယောက်ဖြေထားတာ ကိုကြည့်ပြီးလိုက်ဖြေတာကွ..***
***၈ ထဲမှာ ၅ နှုတ် ၃ ကျန်တယ်ထင်လို့ ၃ လို့ ဖြေလိုက်တာ...လေ***
အရူးတွေအတွက် ညဏ်ကောင်းဖို့ မလိုဘူး..ကံကောင်းဖို့ ပဲလိုတယ်ဟုတ်..:D
တစ်ခါတုန်းက အညာက ကုန်သည်တစ်ယောက် ရန်ကုန်ကိုရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက နေ့ လည်ဘက် မှာ အအေးသောက်ဖို့ 
သူငယ်ချင်းတွေက အအေးဆိုင်မှာ ရွှေရင်အေးဖာလူဒါ ၀ယ်တိုက်တာပေါ့..အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက အညာမှာ ရွှေရင်အေး ဖာလူဒါမရောင်းသေးပါဘူး....
ကုန်သည်ကြီးလည်း မသောက်ဖူးတော့ တော်တော်လေး ကြိုက်သွားပါတယ်..
အဲ့ဒီနောက် အညာကို ပြန်ရောတော့ အိမ်က လူတွေကိုရန်ကုန်အတွေ့ အကြုံ ပြောပြတာပေါ့..ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေက ဖာလူဒါရွှေရင်အေးဝယ်တိုက်တဲ့အကြောင်း ..ရန်ကုန်မှာက ပွဲစားလူလိမ်တွေများတဲ့အကြောင်း တစ်ချို့ ဆိုင်တွေဆို တောသားလို ရိုးရိုးအအတွေ့ ရင် ဈေးတင်တဲ့အကြောင်း ဒါ့ကြောင့် ရန်ကုန်ရောက်ရင် အ၀တ်အစားအပြောအဆိုကအစ သတိထားသင့်ကြောင်းပြောပြတာပေါ့..
နောက်တစ်လအကြာ ကုန်သည်ကြီးနေမကောင်းလို့၇န်ကုန်ကို သားမက်ဖြစ်တဲ့သူကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်..
ရန်ကုန်ရောက်ရင် နေရာတကာလည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိဖို့ သေချာမှာတာပေါ့..
အဲ..ပြီးတော့ ရန်ကုန်က ရွှေရင်အေးဖာလူဒါ ကိုလည်း သောက်ဖူးတယ် ရှိအောင် ၀ယ်သောက်လာခဲ့ဖို့ မှာလိုက်ပါတယ်.
အဲ့ဒါနဲ့ သားမက်လေး ရန်ကုန်ရောက်လို့ အလုပ်တွေပြီးတော့ ယောက္ခမကြီး ပြောသလို သိပ်ကောင်းတဲ့ ရန်ကုန်က ဖာလူဒါရွှေရင်အေးသောက်ဦးမှ ဆိုပြီး ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲ ၀င်သွားပါတယ်..နေ လည်ထမင်းစားချိန်ဆိုတော့ ဆိုင်က
အဲ့ဒါနဲ့ အညာသားလည်း ခုံအလွတ်တစ်လုံးမှာဝင်ထိုင်ပြီး ဟန်ပါပါနဲ့ 
ခဏလေးနေတော့ စားပွဲထိုးက လာချပေးပါတယ်..
အညာသားလည်း စားပွဲးထိုးလေးချပေးတဲ့ ခွက်ကို သေချာ ကြည့်ပြီး အံ့သြနေတယ်..
ပြီးတော့ ဖြေးဖြေးချင်း သောက်ကြည့်လိုက်တယ်..
ပြီးမှ...***အင်း အဘပြောတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ က ရွှေရင်အေးဖာလူဒါဆိုတာ ငါတို့ အညာက ရေလိုပါပဲလား..နည်းနည်းလေး အေးနေတာတစ်ခုပဲ ပိုပါတယ်..ဘာမှလည်း မထူးဆန်းပါဘူး..***
နောက်တော့ ကုန်အောင်မော့သောက်ပြီး ဆိုင်းဘုတ်မှာတင်ထားတဲ့ ရွှေရင်အေးဖာလူဒါဈေးနှုန်းအတိုင်းပိုက်ဆံကိုစားပွဲပေါ်ချပြီး
ဆိုင်ကနေထွက်လာတော့ ဆိုင်ပေါက်ဝ ရောက်ခါနီးမှာ စားပွဲထိုးလေးက
***အစ်ကို အစ်ကိုမှာတဲ့ ရွှေရင်အေးဖါလူဒါ ရပါပြီခင်ဗျ***
***အညာသားက အောင်မာ ဒီရန်ကုန်ကစားပွဲထိုးတွေ ငါ့ကိုတောသားငတုံးထင်လို့ နှစ်ခါရောင်းဖို့ ထင်တယ်..***
****ဟေ့ မင်းတို့ က ငါ့ကို အညာသားဆိုပြီး နှစ်ခါစားဖို့ ထပ်ခေါ်တာလားကွ ငါက အညာသား လူပါးကွ နှစ်ခါတော့မရဘူး တစ်ခါပဲရမယ်
မင်းလာချပေးတဲ့ ဖာလူဒါက ငါတို့ အညာက ရေလိုပဲ နည်းနည်းနည်းအေးတာပဲကွာတယ်..ဘာမှမဆန်းဘူး..မင်းတို့ ရန်ကုန်က ရွှေရင်အေး ဖာလူဒါဆိုတာလည်းနောက်ဘယ်တော့မှ ၀ယ်မသောက်တော့ဘူးကွ ***
ဆိုပြီး မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ထွက်သွားပါလေရော..
ဆိုင်ထဲက လူတွေနဲ့ ဖာလူဒါလာချပေးနေတဲ့ စားပွဲထိုးလည်း ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ အညာသားထိုင်သွားတဲ့စားပွဲကိုကြည့်လိုက်တော့ ခုနတုန်းက စားပွဲထိုးလေး လာချပေးတဲ့ ရေခွက်အောက်မှာ ဖာလူဒါဖိုးပိုက်ဆံရှင်းထားပါတယ်...
အော်....လက်စသတ်တော့ အညာသားက ရွှေရင်အေးဖာလူဒါလာမချခင် ရွှေရင်အေးဖာလူဒါမရောက်ခင်စားပွဲထိုးလေးက အမောပြေသောက်ဖို့ရိုးရိုးေ၇အေးလေးတစ်ခွက် အရင်လာချတာကို
အညာသားကမမြင်ဖူးတဲ့ ရွှေရင်အေးဖာလူဒါလာချတယ်ထင်လို့ သောက်ပြီး
***အညာသား နှစ်ခါတော့မရဘူး တစ်ခါပဲရမယ် ****ဆိုပြီး ရမ်းသွားကိုး....:D
အညာက အဘဦးညိုတုတ် ပြောပြတဲ့ ဟာသလေးပါ..ကြာတော့လည်းကြာနေပါပြီ..
Written..By... ရွာသူလေးချမ်းချမ်း (ရင်တွင်းဖြစ်) http://www.haymonchan.blogspot.com
Written By Aeimt Kabyar Mon at 6:33 AM
:D ပြုံးသွားသည်... များများ